ဤခေါ်ဆိုမှုကိုလုပ်ဆောင်ရန်စစ်ဆေးပါ။ | Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, ဇူလိုင်လ 10, 2008 အင်္ဂါနေ့, အောက်တိုဘာလ 30, 2012 Douglas Karr
အကယ်၍ သင်သည်ဤစာမူကိုကျွန်ုပ်၏စာ (သို့) အီးမေးလ်မှဖတ်လျှင်၊ ကိုနှိပ်ပါ အဆိုပါ callout များအတွက် post!
အဆိုပါအတွက်စိန်ခေါ်မှုများတစ်ခုမှာ စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်း သူတို့ရဲ့စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကိုစမ်းသပ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်နည်းပညာနဲ့မကြာခဏလေ့ကျင့်ဖို့အချိန်မရှိတဲ့ရှေးရှေးတွေနဲ့အလုပ်လုပ်နေတယ်။ ကျေးဇူးတင်စရာမှာကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဒါရိုက်တာ Marty Bird သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအနေဖြင့်သတင်းအချက်အလက်ပါရှိသောလစဉ်သတင်းလွှာများနှင့်ထိုကွာဟမှုကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်ကူညီပေးနေသည်။
အချို့လူများက callouts သည်သာမန်ဒိန်ခဲဖြစ်သည်ဟုထင်သော်လည်း၎င်းတို့အလုပ်လုပ်ကြသည်။ သူတို့ကအဆင့်ဆင့်၏နံပါတ်ပေါ်တွင်အလုပ်လုပ်ကြသည်။
လှုပ်ရှားမှုသို့ခေါ်ဆိုရသည့်အကြောင်းရင်း ၃ ချက် -
အသုံးဝင်မှု - အကယ်၍ သင်၏စာမျက်နှာကိုကောင်းစွာဒီဇိုင်းဆွဲထားပြီးအာရုံပျံ့လွင့်စရာအနည်းငယ်သာရှိပါကဖုန်းခေါ်ဆိုမှုသည်ဖောက်သည်များ၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုရရှိလိမ့်မည်။ ၎င်းတို့သည်မည်သည့်နေရာတွင် နှိပ်၍ သွားနိုင်သည်၊ ကူးယူနိုင်သည်၊ မှတ်ပုံတင်သည်စသည်စသည်ဖြင့်ဖြစ်သည်။ visit ည့်သည်၏အာရုံကိုရယူခြင်းသည်ဆုံးရှုံးခြင်းထက် ပို၍ ဆိုးသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လာမယ့်ဘယ်ကလစ်ကိုသူတို့မသိကြပါ.
Options ကို - အရေးကြီးသလိုပဲ၊ visitors ည့်သည်တွေကသင့်ရဲ့ site ကိုမကြာခဏလာကြတာကြောင့်သူတို့ဟာရှာဖွေမှုတစ်ခုကနေဆင်းသက်လာတာကြောင့်သူတို့ကသင့်ရဲ့ဆက်နွယ်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်လမ်းကြောင်းပေးဖို့အရေးကြီးတယ်။ သူတို့ရှာဖွေနေတာကိုတွေ့ခဲ့ပေမဲ့နောက်တစ်ခုကသူတို့ဆီပြန်လာတာကိုဆက်ထိန်းထားနိုင်တယ်။
သိချင်စိတ် - ပစ္စည်းပစ္စယများကိုသာနှိပ်လိုသောသုံးစွဲသူအချို့ရှိသည်။ ရဲရင့်စွာရဲရဲဝံ့ဝံ့ခေါ်ဆိုမှုကိုပေးခြင်းသည်၎င်းတို့ရှာဖွေနေသည့်ရည်မှန်းချက်ကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်သင့်အားရောင်းချမှုအသစ်တစ်ခုယူဆောင်လာနိုင်သည်။
မင်းသမီး Emma Hamilton
28:2008 pm တွင်ဇူလိုင်လ 4, 49
အကြံဥာဏ်ကောင်း အီးမေးလ်အကြောင်းအရာနဲ့ပါတ်သက်ပြီးသိသာထင်ရှားတဲ့ဆောင်းပါးတွေပါတဲ့ဒီဟာကတကယ်ကိုအသုံး ၀ င်တဲ့အရင်းအမြစ်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တွေ့တယ်။
28:2008 pm တွင်ဇူလိုင်လ 9, 36
ထိုအရင်းအမြစ်ကိုကျွန်ုပ်သည် Email Marketing တွင်ရေးသားခဲ့သောဂူဂယ်လ် Knol သို့လည်းထည့်ပြီးပါပြီ။